Kana haa ilaallu malee, irra deddeebinee obsa waliif dhaamun warroota kasaaraa jalaa nagaha bahan keessaa nu taasisa. Isaan amananii, hojii gaggaarii dalagan, haqa walii dhaamanii fi obsa walii dhaaman malee.
Kunniin afran wanta kasaaraa hoongoo addunyaati fi Aakhiraa jalaa nama baasaniidha: Rabbii fi hundeewwan iimaana hafanitti amanuu, Hojii gaggaarii hojjachuu, Haqa walii dhaamu fi Obsa sabrii walii dhaamudha. Namni haqa erga beeke, haqa kana hordofu qaba. Karaa haqaa keessa deemun immoo obsa guddaa barbaachisa. Faallaa kanaa, obsa dhabuun gara muddamuu fi jarjaruutti nama dhiiba.
Ergasii yeroo murteessu keessatti ni dogongora, karaa sirrii wanta tokko hojii irra oolchan ni balleessa. Dirree Obsaa Dirree obsaa jechuun bakka fi yeroo obsi itti barbaachisudha. Namni hifachuu dhiisee hojii ofii yoo itti fufe obsa qabaa jechuudha.
Namni uumama isaatiin jarjaraadha. Dhimmoota yeroo isaanii keessatti bakkaan gahuuf eegun isatti ulfaata. Yeroon gahuun dura wantoota muddamsiisu barbaada. Yeroo rakkoo Obsuu: Yeroo rakkoon buutu Islaamni amala obsaatin faayamutti qajeelche jira. Jireenyi addunyaa tanaa iddoo qormaataa waan taatef,namoonni rakkoo fi toltuun akka qoraman isaaniif ifa godhe.
Islaamni namoota jaalala Rabbii barbaadun obsaniif mindaan guddaan akka jiru waadaa gala:. Warra obsan gammachiisi. Warri suni isaanumatu qajeelfamoodha. Keeyyanni kuni rakkoolee adda addaatin yommuu tuqaman, akka obsuu qaban nama qajeelcha. Mataan isaaniitu kan Rabbiiti. Qaamni fi nafseen isaanii kan Rabbiiti. Mana kanatti wanta feete hojjatta. Yoo feete ni diigda, yoo feete tursiisuun ni tottolchita. Kanaafu, murtii Rabbii irraa rakkoon yommuu nama tuqu wanti namarraa eeggamu, Obsuudha.
Haala kanaan, Muslimni fi kaafirri addaan bahu. M uslimni iimaana isaatiin ifa abdii ibsata, kaafirri immoo kufrii isaatin dukkana keessatti tara. Keeyyanni armaan olii Rabbiin irraa gammachiisa of keessatti qabata. Gammachiisni kuni dhimmoota lama of keessatti hammachuun dhufe: Dhimmi 1ffaa n: Gooftaa isaanii irraa faaruutu isaan irra jira.
Maqaa gaariin isaan kaasuu. Dhimmi 2ffaa n: Gooftaa isaanii irraa rahmatatu isaan irra jira. Rahmata kanaan wanti jaallatamaan isaaniif dhufa, wanti jibbamaan isaan irraa fageefama. Mindaa gaarii kanaan gammachiisni isaaniif male. Sababni isaas, isaan warra karaa gammachuu isaanitti qajeelanii fi daandii qajeelaa keessa deemaniidha. Isaan yommuu jaalala Rabbii barbaadun obsan, rahmataa fi araarama Rabbii haqa godhatan.
Isaan faarsun maqaa gaariin isaan kaasun rahmata Rabbii irraayyi.Dirama Afaan oromoo haariya jireenya jaarsaa fi jaartii ramadaana duraa fi ramadaana keessa kutaa 1ffaa.
Diramaan kun haala jaarsaa fi jaartiin ramadaana duraa fi ramadaana keessa itti jiraatan irraa hojjanne Diramaan kun kutaa kutaan ramadaana keessa torbaanitti yeroo 3 KZread channel Obsa Techno irratti isiniif dhihaata. As,wr,wb obboleessa islaamaa yeroo haasoyu laa,ilaa jettee hin usin ilma islaamaarraatti haraamaa Laa,ilaah illallaah je,iitii guuttadhu.
Draaman bayye namatti tola garuu miyyon surre sanif gophe takku lama ol dheerattu san irra baasa maalo. Bari baran kaam diramati qofadha yaa Rabbii Mucayun tuni maalidha?
Ammatin issa Imma itti tapata jirti yoo mualima kaatatutate. Diraman kessan namatti hin tolu seera islamumma hin gunne dhifama wajiin surre maxanfachun maliifika. Isiinira hin bareedu malii intalii akkas gowan mali kopheen sunu sii dhiibdee Alaanu wan deemu hin beeyneni manatiin mal gotaa rakaata dhiiho badiiyara dhuftee Adaa suree maliif kayyata musiima garuu wan Ramadana wajatanii musliimayu hin fakkatu intalii maliif musliima maqaa baleesiitan.
Dirama ramadana hojachun dura obeletii yoom muslima tatee ufana kee fi kan fulatti uf layxee kana ufiraa qulqulesii yoon musliman tahiin imo dursii wa'ee amanta islamaa qoradhuu ufanan dubartii islama kana mitti :-dheraa :-Furdaa :-baldhaa Ufanan dubartii islama suree mitti kanafu dursii islmamuman mal akka ajajuu gubadhuu.
Maaaashahallah maaaashahallah maaaashahallah dhugaa jetanii oboolewan koo Nammaa amantii kenyaa amatii muslimaa amantii Amanti calluu jabefattuu Rabbii mu haaa tasissuu Inshahallah.
Wantaa qalbii muslima hawattu dalagaa diraman muccattin hojjatu fi ufanan issi wal hin madaluu ala mustan rabbin issi haa qajelchu. Muslimin yomu akkana miti. Aswrwb diramaa kesaanii baredadha garuu suree mucayoo godhaatee isilaamaa tatee sirii mitii kanafuu xxxxxxxxx xxx xxx dogogoraa qadanii dhibadhiibatii. Ummataa Muslimaa birti suuree godhachuin ke hangumaa takka nama jibisiftaa kophee do suuree lafa godhii arga te.
Bultiidhaaf Dubartii dubrummaa qabdu moo tan haalaa fi amala gaarii qabdu filatta? Itti Booharaa. Jaarsa jaartii irratti jaartii 3 fuudhee agarsiise, Dirama barumsa guddaa qabuu fi nama kofalchiisu. Draamaa ajaaibaa Bakara Suresi Mohmed Hesham.Tulluu Jala. Sadeenuu Harreen meeshaa magaalaa fii mana jidduu namaaf geeysan.
Each Olola walirratti oofuu fi wal dadhabsiisuu haa dhaabnu. Maatiiwwan gorsa Yihowaan karaa Dubbiisaa kenne barbaaduunsaanii gaariidha. Atis tole jettee fudhattee abbaa kee amansiiste gara biyya alaa qajeelte. This combination is best for reducing overall loss and helping with hair regrowth. Kanaaf harka wal qabannee haa kaanu. Wal loluun dantaa sabichaa fi biyya Oromoo tajaajiluu irra diinoota isaatii tajaajila waan taheef Oromoon hundi didduu qaba. If you want to support the development of … Dirama kana irra erga guddaa fi Boharti sammu akka argatan abdi qabna Umurii wal qunnamtiisaalaa jalqabuun gaariidhajedhame qorannon ifoome Algodoo is now available as a free Recommended oil for bmw 325i. Bara tti, Waldaan Wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa irra caalaa Oromootan yoo dhaabbatu dabalataan gosoota ummattoota kibba Itoophiyaas keessatti hirmaatanii jiru.
Waahiloota sadiihitu ture magaaloota Andaluusirraa takka kheeysatti. Kunis Qonnaan bultootni bittaa fi Warra gidduu deemtota intermediaries : Jarri kun ammoo faddalaa jedhamu. Mixxiin Wal-Qabatee. Innis, akka abbaan kee biyyaa arabaa si ergu. Uumama Akkuma armaan olitti isiniif kaasuuf yaale, namni gaafa dhalatu sammuun isaa qulqulluu ture. Bakka dhoksaatti hidhamuun isaa kun guutummaatti hin xumuriin akka mana hidhaa irraa hin baane kan godhu ture.
Gargaarsa isaatiin suutuma suuta amalawwan koo … haala yerootiin wal qabatee qabxiilee afur 4 waan godhuu qabnuufi waan godhamuu hin qabne kan adda nuuf baaftu ulamaayii sheekkota keenyaaf duaata keenyarr Algodoo gives you the opportunity to play with physics. Warri Hafuuraaan deeman geggeessaa Hafuurichaa hordofu. Tutorial android isa jalqabaa kana keessatti, akkamitti akka android appilikeeshinii mataa keessanii hojjetan isinitaan agarsisa website keessaniif application stepdhaan android studio fayyadamuudhaan hojachuu akkaa dandeessan isin agarsisuufan jedha.
Ummatni daangaa Uumamaa waliin qabus wal makee jiraachuun waanuma Uumamaan jiru dha. Waa'ee Keenya. Waaqayyo wanta nu fayyadu nutti hima.
Oromoon wal malee gargaarsa biraa hin qabu. But I say to you that everyone who keeps on looking at a woman so as to have a passion for her has already committed adultery with her in his heart. Quunnamtiin hiriyoota koo waliin qabu na jalaa ciccite. Isa boodas sagantaan bashannanaa itti fufe. Namaa Fi Namummaa. Lafatuu nan maree. Timirri albuudota qaama namaatiif barbaachisan hedduun badhaadhe jira.
Bara humna qabanittu waa hin tolchinee amma waa Oromoof godhu jedhe namni irraa eegu yoo jirate namni sun lubbuun ni jira hin jedhamu. Maalummaa Irreechaa keesumaa kan birraa. Irra deebii: Cuuphamuu irraa duubatti akkan jedhu kan na godhu maali dha? June 14, Haadhaafi abbaan gosa barnoota ilmaan isaaniitiif kennamuu filachuuf mirga dursi kennamuufii ni qaban.
Namni harka Waaqayyoon kan tolfamedha. Viral hemorrhagie gubaattiin qaama VHFs tokko tokko baayisaani hamoo miti, haata'u malee isaan kaan garu hama waan ta'aniif nama ajjeesu.Balaa xayyaaraa ET Dilbata darbeen namoota lubbuu dhaban keessaa, gargaaraan paayileetii Ahimadnuur isa tokko.
Ahimadnuur paayileetii osoo hin ta'iin dura yeroo barattoota turanitti waggoota sadiif Kolleejjii Ijaarsaa Liidataa keessatti waliin barachuusaanii, hiriyyaansaa Fakruddiin Jamaal BBCtti himeera.
Waliin barachuu qofa osoo hin taane, doormii tokko keessa akka turanillee dubbata Fakruddiin. Hiriyyaa isaa Ahmadnuuriin ibsuuf kan rakkate Fakruddiin " Ahmaadnuuriin ibsuuf natti ulfaata. Nama baayyee tasgabbaa'aadha. Wantoota hunda obsaan kan inni hojjattu. Obsa qaba,'' jedha. Dameen barnootaa Arkiiteekicharaa kan obsa gaafatu ta'uus, inni garuu obsaa fi gad fageenyaan barnoota isaa xumure jedha.
Barnootarratis ta'ee maatiirrati nama sii gargaaruuf duubatti hin deebiinedha. Kubbaa miilaa akka taphataa tureefi muuziiqaa duriifiis jalala addaa akka qabu dubbata. Jireenya isaa keessatti yeroo qaxxaamuraan fayyadamu argee hin beeku. Yeroos barnoota isaa xumuree gara hojiitti waan galee kophaa waan ta'uuf, yeroo hedduu mana keenya dhufa ture," jedha Fakruddiin. Fakruddiin yeroo dhumaa itti hiriyaa isa arge yeroo dubbatu "Kanan isaa arge imala isaa guyyaa tokko durseeti.
Gaafa Sambata xiqqaa jechuudha. Kunis yeroo inni hiriyyaa isaa kan ijaarsa gamoo xumursiisuu finishing fi Halluu fi Ku'aartiizii irratti hojjatu arguuf deeme ture. Akka Fakruddiin jedhuutti jalqaba kan argan Kapteen Yareediini. Kapteen Yareediin nan beeka ijoolleedha. Waliin imalee beeka. Nama gaariidha jedhee obboleessi isaa akka itti hime dubbata. Fakruddiin itti aansee "eessa imalu turan jedheni. Achiis obboleessi gara Naayiiroobii nan jedhe.
Guyyaatti imalli garagaraa waan jiruuf imala biraa ta'a jedheen yaade," jedha Fakuruudiin. Achii boodas waan uumame adda baasuuf waan hedduu godhani. Booda hiriyyoonni bilbilanii sa'aatiin balaliinsaa isaa ganama ta'uu isaa hubatan.
Dhalatee kan guddate magaalaa Dirree Dhawaa yoo ta'uu, barnoota isaa Injiinariingii barachuuf gara Finfinnee dhufuu isaa Fakuruudiin dubbata. Inni hiriyyoota isaaf waan hedduudha. Inni akka abbaati, hiriyyaati, obboleessaattis".
Intarneetii yeroo ilaalan nahuu jalqabuu isaanii dubbata. Balaa Xayyaaraa ET Miidhamtoonni eenyu fa'i?Karl Eric Knutsson, Jiruu-fi-Jireenya-Nama, jireenya neefkaa ykn jireenya muka irra adda dha. Fkn, namni gaafa jiraatu akka adurreetti hin jiraatu!
Beekumsi kun beekumsa eenyummaa waa tokkoti dha. Eenyummaa waan tokko kan murteessu Ayyaana dha. Eenyummaa waan tokko beekun, Ayyaana waanti sun ganama ittin uumaame beeku dha. Safuu cabsuun Dhugaa-Ganama Primoridial-Truth kana jallisuu ykn dabsuu dha. Dhugaa-Ganama dabsuu jechuun, seera uumamaa cabsuu ykn diiguu jechu dha.
Seera uumamaaf abboomamuun Ayyaana fi Uumaa walitti araarsuu ykn walitti atoomsuu dha. Karaan Ayyaana fi Uumaa walitti maganasnu ykn ararsinu kun Safuu jedhamee beekama. Dirqamni Jiruu fi Jireenya Namaa kan jalqabaa, gama Safuutiin, Ayyaana fi Uumaa walitti araarsuudhaan dalagaa kan Waaqayyo keessatti hirmaachuu dha.
Safuun gaafiiwwaan ambiiroo kan falaasama xinjireenya Oromo keessa jiraniif deebii waliigala kan kennu xinbeekumsa natoo Oromoo dha. Seeri-Waaqaa addunyeessa universal dha. Dhali nama beekumsa Seera-Waaqaa kana wajjin dhalata innate. Maddi Ayyaana Waaqayyo dha. Humni Waaqa irra maddu Vital-Force kun Ayyaana jedhama.
Dahal, Waan Uumaa keessa jiruu hundi sirnaan kan naqame dha. Seera Uumamaa ykn Seera-Waaqa kanaaf abboomamuun, Safuu eeguu dha. Safuu eeguun dirqama Jiruu fi Jireenya-Namaa dha. Sababni isaa, Safuun hin tumamu. Seerri-Namaa garuu ni tumama. Kutaa 4ffaan itti fufu! Hangasitti nagaan naa tura!
He holds a B. A, and Ph. He also holds a B. His publications include, Metaphilosophy or Methodological Imperialism?
His book titled, African Philosophical Hermeneutics, is forthcoming. He can be reached at: kankokunmalimaali gmail.Obsa yommuu jedhamuu wanta salphaa namatti fakkaata. Obsii jireenya fi qaama ilma namaa guuta kan tuquudha. Bakka obsi hin jirretti jireenyi hin jiru osoo jedhame dhugaa irraa hin fagaatu.
Namoonni garmalee yommuu gaddanii fi dhiphatan yoo obsa hin qabaatin of galaafatuun jireenya ofi balleessu. Walumaagalatti obsa ykn sabrii jechuun mataa keenya yeroo gaddaa fi cinqii abdii kutuu fi garmalee gadduu irraa of eegu, arraba keenya komii dhiyeessu shakwa irraa tiksu, harka keenya fuula rukutuu fi uffata tarsaasu irraa eegudha.
QUOTES ON #OBSA
Akkasumas obsa jechuun wanta irraa dhowwamne hojjachuu irraa of qusachuu dha. Jiinni immoo ifa mataa ofiiti waan hin qabneef nuura jedhama. Garuu dhumni isaa ifa fi gara daandii qajeelatti kan nama qajeelchudha. Namtichi yeroo rakkoo fi daraara san yoo obsa qabaate dhumarratti ifa obsa ni argata.
Haaluma kanaan namatti yommuu rakkoon jabaatu yoo obsa qabaate duuban ifa guddatu isaaf dhufa. Dirreen waraana qalbii namtichaati. Yoo hin fuudhin fedhii isaa kana maaltu daangeessu qabaa? Yoo mataan nama murame qaamni homaa hin fayyadu. Haaluma Kanaan namni obsa hin qabnes imaana hin qabu. Obsi namaa maltuu jechuun wanta Rabbiin namaa murtesse osoo namootatti komii hin dhiyeessin fudhachuudha.
Namni tokko sabrun jamiil qaba jechuuf wantoota sadii guutuu qaba. Nuti jiruu duniyaa keessatti jaalallo keessan turre; Aakhirattis akkasuma. Isiniif ishee jannata keessa waan lubbuun teessan feetutu jira. Isiniif ishee keessa waan barbaaddantu jira. Fedhii ofiiti fi sheyxaanaf hin bitaman.
Namni bade sheyxaana fi humnoota isaatiif harka kenna.
Gara fedhanitti isa qajeelchu. Warroonni akkanaa hoggantoota jallinnaati. Aangoo fi qabeenyatti fayyadamanii namoota daandii haqaa irraa jallisu.Garichi obsa mootummaa qoruurra darbee deeggarsa namoomaaf jedhamee yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhatame akka jijjiiru dirqisiisaa jiraachuu eereera.
Haleellaa garichi raawwateen lammiilee naannolee Tigraay, Amaaraa fi Afaaritti rakkoof saaxilamaniif mootummaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf murannoon hojjechaa jiraachuu kaaseera. Ministeerichi garichi gochaa shororkeessummaa dhoksaa fi ifatti raawwachaa jirurraa akka of qusatu hubachiiseera.
Gareen ABUT haleellaa naannoo Afaarii fi Amaaraatti baneen filannoon nageenyaa akka cufamu taasiisaa jiraachuu ibseera.
Jecha Steve Jobs isa dhumaa
Mootummaan Federaalaa dirqama seeraa fi siyaasaa qabuun humna ittisuu qabutti fayyadamuuf akka dirqamu hubachiiseera. Diyaaspooraawwan iddoolee waraanaan miidhaman daawwachuuf Samaraa galan.
Koreen dhaabbii dhimmaa misooma baadiiyaa Caffee Oromiyaa aanaa Kofaleetii hojii…. Leave A Reply Cancel Reply. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Diyaaspooraawwan iddoolee waraanaan miidhaman daawwachuuf…. Komishinar Lalisee Namee Ityoophiyaatti Ambaasaaddara…. Imaammanni rakkoolee gabaa beelladoota dhaabbii furuuf…. Fana: At a Speed of Life! You might also like. Oduu biyya keessaa. Prev Next. Leave A Reply. More Stories.
Jan 2, Prev Next 1 of 3, Obsa Jireenya is on Facebook. Join Facebook to connect with Obsa Jireenya and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the. Kana haa ilaallu malee, irra deddeebinee obsa waliif dhaamun warroota kasaaraa jalaa Jireenya namaa keessatti obsi dirree baay'ee qaba. AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features.
© Google LLC. Yaa ta'uutii mootummaan gareen kun badii lammiileerraan akka ga'u kan hin eeyyamne ta'uu ministeerichi ibsa isaan himeera. Garichi obsa. Free jireenya images stock on cvnn.eu Obsa-furtuu milkaa'inna fi Gammachuu-kutaa 3ffaa - Jireenya Badhaatu Download. Obsii jireenya fi qaama ilma namaa guuta kan tuquudha. Bakka obsi hin jirretti jireenyi hin jiru osoo jedhame dhugaa irraa hin fagaatu. Namoonni. Dameen barnootaa Arkiiteekicharaa kan obsa gaafatu ta'uus, Jireenya isaa keessatti yeroo qaxxaamuraan fayyadamu argee hin beeku.".
Ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti rakkoo adda addaa waliin wal'aanso baha. Takkaa rakkoon tuni isa kuffisti takkaa immoo isatu rakkoo tana kuffisa. 'Jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf, wanta gaarii taʼe haa (a) Addunyaa haaraa keessatti obsa argisiisuun kan nu barbaachisu gama kam. Jiraattus jireenya diigamaa. Har'as taanaan boris Obsa Anis tahu atis.
Yoo hin qabaatin obsa. Manca'uuf diigamuu Warri jireenya barbaaduuf. Obsuun jireenya keessatti waan baaye barbaachiftudha namni obsa hin qabnee akka allaatti koola hin qabneeti.
١٢:٣٣ م · ١٣ يوليو ٢٠١٦·Twitter for Android. Dameewwan kunneen hundi yeroo ammaa kanatti gara kuteenyaa fi obsa guddaa qabaachuudhaan kan irratti hojjetaman yoo ta'e gabaan isaan biyya. Anaaf Jireenya 5; Yesus Jireenya 4; Imaam Jireenya 4; Ifa Jireenya 4 Seena Jireenya 2; Obsa Jireenya 2; Obsaa Jireenya 2; Kiristoos Jireenya 2.
Kan dabarsite cvnn.eu keessa jirtutti cvnn.eu itti deemtuuf abdiin cvnn.eu yaadde gahuuf obsa qabaadhu. Obsa Anis tahu atis. Yoo hin qabaatin obsa. Manca'uuf diigamuu Yoo obsa hinqabaatin Warri jireenya barbaaduuf.
Oliif gadi joortanis. mudde2G: @mudde2G * Qabaadhu: ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu!
* Bara Jireenya Kee. hundumaa isaa ni amana hunduma isaa adabata hunduma isaa obsa. namoonni kan biraa qabu hin hawwu utuu mormii malee jireenya of gad deebise jiraata.
Jiruu-fi-Jireenya-Nama, jireenya neefkaa ykn jireenya muka irra adda dha OBS fi OBN Qophii Qaammeef ﻿ Oromia Broadcasting Services (OBS). “Salaata dhiisun jireenya keessatti waan milkooftu ykn gammachuu argattu sitti fakkaataa? Hanga Jannata geessu obsa qabaadhu. Gamaggama kana irrattis teknoolojiiwwan qorannoo jiruufi jireenya hojii yeroo fudhatuufi bu'aa barbaadame argachuuf obsa kan barbaachisu.
Miraculous ladybug fanfiction marinette breaks down
Filippa fransson height weight
Milorad cavic kosovo je srbija
Lenti polarizzate o non